विश्व Archives | Nepal eNews - Nepali Online News Portal
जापानमा कोरोना सङ्क्रमणबाट निधन हुनेको संख्या बढ्दाे
April 27, 2021 April 27, 2021 Nepal E News
टोकियो । जापानमा सोमबार सार्वजनिक गरिएको तथ्यांक अनुसार यहाँका सङ्क्रमितमध्ये १० हजारको निधन भएको छ । सङ्क्रमण घोषणा गरेको दोस्रो दिनमै यहाँ कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनेको संख्या झन धेरै देखिएको छ । यहाँ हालसम्म ५ लाख ६६ हजारभन्दा बढी नागरिक सङ्क्रमित भएको बताइएको छ । यहाँका अधिकारीहरुले पछिल्लो केही हप्तामा जापानमा सङ्क्रमण हुने र मृत्यु हुने दर बढिरहेको पनि बताएका छन् । जापानका स्वास्थ्यमन्त्री र स्थानीय सरकारी अधिकारीहरुले मंगलबार दिएको जानकारीअनुसार आजसम्ममा यहाँ सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या दश हजार पुगेको हो। जापानको राजधानी टोकियो र पश्चिमी प्रान्त ओसाका, क्योटो र…
जापानमा फेरि संकटकाल घोषणा, नागरिक थप त्रास !
एजेन्सी । जापानका प्रधानमन्त्री योशिहिदे सुगाले कोभिड- १९ भाइरसको महामारी तीव्र रुपमा फैलिएपछि फेरि पनि संकटकालको घोषणा गर्नुभएको छ । प्रधानममन्त्री सुगाले शुक्रबार जापानको राजधानी टोकियोसहितका क्षेत्रमा फेरि संकटकालको घोषणा गर्नु भएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् । उहाँले जापानको राजधानी टोकियो र अरु केही पश्चिमी प्रान्तहरु ओशाका, क्योटो र ह्योगोमा संकटकालको घोषणा गर्नुभएको थियो । शुरुका महिनाहरुमा यहाँ यो महामारी फैलिएको थिएन । प्रभावकारी रुपमा जापानमा महामारीको नियन्त्रण भइरहेको बताइएको थियो । तर पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजातिको जीवाणु देखिएपछि भने यहाँ महामारी तिब्र बन्दै गएको बताइएको छ ।…
काठमाडौं, २४ फागुन । १११ औं अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस विश्वभर विविध कार्यक्रम गरी आज मनाइँदैछ । हरेक वर्ष मार्च ८ तारिखका दिन यो दिवस मनाउने गरिन्छ । नारी मुक्ति आन्दोलनकी अभियन्ता क्लारा जेट्किनले सन् १९११ मार्च ८ मा महिला कामदारमाथि भएको श्रम शोषणविरुद्ध आवाज उठाएको दिनको स्मरणमा विश्वभर महिला दिवस मनाउने प्रचलन छ । राजनीतिक तवरबाट शुरु भएको भए पनि हाल महिला अधिकार, महिला सशक्तीकरण र लैंगिक समानता, लैंगिक विभेद तथा हिंहा उन्मूलन आदि सवालहरू अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका विषयहरू हुने गरेका छन् । सर्वप्रथम् १९०९ फेब्रुअरी २८ मा…
विश्व, समाजLeaveacomment
के तपाइँले यस्तो खेत देख्नुभएको छ जहाँ बालीनाली होइन, कारको खेती हुन्छ ? अमेरिकाको नेवादामा एउटा यस्तो ठाउँ छ, जहाँ कारहरु फल्दछन् । नेवादाको गोल्डफिल्ड नामक पहाडको समाचार हो यो । उक्त पहाडमा एकजना मानिसले कारको खेती गरेर कीर्तिमान कायम गरेका छन् । माइकल मार्क रिप्पी नामका व्यक्ति सन् २०११ मा त्यस ठाउँमा जमीनमा कार गाड्ने काम गरेका थिए । चौरमा रुख ठडिएझैँ गरी कारहरु गाडिएका छन् । सो ठाउँको नाम द इन्टरनेसनल कार फरेस्ट अफ द लास्ट चर्च राखिएको छ । अहिले उक्त ठाउँमा ४० वटा भन्दा धेरै पूराना…
राजाहरू धेरै श्रीमती राख्नमा खप्पिस हुन्छन् भन्ने कुरा हाम्रै देशको इतिहास पढ्दा पनि थाहा हुन्छ । हाम्रोमा अहिले राजतन्त्र छैन त्यसैलले बहुपत्नीवाला राजा पनि छैनन् । तर यो जमानामा दुनियाँको एउटा देशका राजासँगै १५ वटी पत्नी छन् । अफ्रिकी देश स्वाजिल्याण्डका राजा मस्वाती तृतीय आफ्ना १५ जना पत्नीसँग सगोलमा बस्दै आएका छन् । अझ रोचक त के भने आफ्ना पत्नीहरूलाई उपहार दिनका लागि उनले झण्डै २ अर्ब रुपैयाँबराबरका लग्जरी कार खरिद गरेका छन् । हुन त ती राजाका १६ वटा पत्नी थिए । तीमध्ये १ जना पत्नीको मृत्यु भइसकेको छ…
काठमाडौं । भौतिक विकासको तथा पूर्वाधारको मामिलामा चीनले चमत्कार गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक चीनले एउटा यस्तो अदभुत विमानस्थल तयार गरेको छ, जसले पूर्वाधारको क्षेत्रमा चीन कति अगाडि छ भन्ने देखाउँदछ । यो एयरपोर्टको तस्वीर पहिलोपटक देख्दा त्यो कुनै सामुदि्रक जीव आकारको काल्पनिक अन्तरीक्षयान जस्तो लाग्दछ । सामुदि्रक जीव स्टारफिस आकारको यो एयरपोर्टको दुई महिना अघि मात्रै चिनियाँ राष्ट्रपतिले उदघाटन गरेका हुन् । चीनको बेइजिङमा बनेको यो विमानस्थलको नाम डाजिङ्ग इन्टरनेशनल एयरपोर्ट हो । ११ अर्ब डलर लागतमा यो एयरपोर्ट तयार भएको हो । ९८ वटा फुटबल मैदान बराबरको…
काठमाडौं । यो दुनियामा मान्छेको हत्या हुँदामात्र तहल्का मच्चिने होइन रहेछ । कहिलेकाहीँ एउटा कुखुराको हत्या हुँदासमेत ठूलै काण्ड मच्चिँदो रहेछ । छिमेकी मुलुक भारतमा एउटा कुखुरा मारेको विषयलाई लिएर ठूलै दंगाफसाद भएको छ । यो काण्डमा अहिलेसम्म ७ जना पक्राउ गरी पुलिसले मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ । मृतक कुखुराको पोस्टमार्टम भैसकेको छ भने घटनाको थप छानविन पुलिसले गरिरहेको छ । मान्छेको हत्या हुँदासमेत पुलिस चुप लागेर बसेको भन्ने आरोप लाग्छ हाम्रो देशमा । तर भारतमा चाहिा कुखुराको मृत्युको घटनाले पुलिसको निद भगाइदिएको छ । बिहारस्थित कैमुर जिल्लाको फिरोजपुर गाउँमा…